Page 38 – Popinvdo
သမီးကို မုဒိန်း ၀ိုင်းကျင့်တဲ့ သုံးဦးအနက် နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရပြီး တစ်ဦးကို သေအောင် ဓါး နဲ့ထိုးသတ်တဲ့ အာဇာနည် အမေ အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်
သမီးကို မုဒိန်းကျင့် သူ သုံးဦးအနက် တစ်ဦး ကို အသေ၊ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရအောင် ဓားဖြင့်ထိုး သမီးကို မုဒိန်းကျင့် သူ သုံးဦးအနက် တစ်ဦး ကို အသေ၊ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရအောင် ဓားဖြင့်ထိုးသည့် အမျိုးသမီး အမှု မှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ် လူတစ်ဦး ကို ဓားဖြင့် အသေထိုးသတ်ပြီး ကျန်နှစ်ဦးကို …
ဆရာမ သားကို ဖိုး​ထောင်​ဖင်​ချတယ်​ ”
“ဆရာမ သားကို ဖိုး​ထောင်​ဖင်​ချတယ်​ ” “​ဟေ ” ငြိမ်း​မောင်​ တိုင်​လိုက်​သည့်​စကား​ကြောင့်​ ဆရာမ ​ငေါက်​ခနဲ မတ်​တပ်​ထရပ်​လိုက်​သည်​။ သူတိုင်​လိုက်​သည်​ကို​တော့ အတန်းထဲမှ မည်​သူမှ မကြားလိုက်​ “ဖိုး​ထောင်​ လာစမ်း ” ဆရာမ ​ခေါ်လိုက်​​တော့ တစ်​တန်းလုံးအသံတိတ်​ပြီး ဖိုး​ထောင်​အား စိတ်​ဝင်​တစားကြည့်​ကြသည်​။ ဖိုး​ထောင် ​ကား ကုတ်​​ချောင်း​ချောင်းနှင့်​ အတန်း​ရှေ့အ​ရောက်​၌ “ငြိမ်း​မောင် ​က …
၁၅ နှစ်သမီး ရလိုက်တဲ့ ရည်းစားစာ နဲ့ အမေရဲ့ တုံ့ ပြန်ချက်
သမီးက အသက် ( ၁၅ ) နစ်ပြည့်ခါစ ( ၉ ) တန်းတက်ပါတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ကျောင်းဆင်းရင် တတွတ်တွတ်နဲ့ သူငယ်ချင်းများ အကြောင်း၊ အတန်းထဲကအကြောင်း၊ ဆရာဆရာမများအကြောင်း၊ သင်ခန်းစာအကြောင်း၊ သူဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်များရဲ့ အကြောင်း ဘာကိစ္စပဲ ရှိရှိ၊ သမီးဖြစ်သူက မိခင်ကို ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းမှာ သမီးဖြစ်သူက …
သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။တိုက်တွန်းစကားအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား ” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့… ၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဂုဏ်တော် ၄။ မေတ္တာ …
ရေဘယ်လောက် ပဲ ကြီးကြီး ရေ နစ်မြှုပ်မသွား တဲ့ ရှင်ဘုရင်များ ခေါင်းဆေးကျွန်း နတ်ရေတွင်း
ခေါင်းေ ဆးကျွန်းသည် မော်လမြိုင်မြို့ နှင့် မုတ္တမအကြားသံလွင်မြစ်. အထ္ထရံမြစ် . ဂျိုင်းမြစ် . ဒုံသမိမြစ် . ဟောင်သရောမြစ် (စန္ဒရောမြစ်)စသည့် မြစ် ၅ ခုတို့စီးဝင်ပေါင်းစုံရာ သို့မဟုတ် သံလွင် အထ္ထရံ ဂျိုင်း ဒုံသမိ မြစ် ၄ စင်း မှ ပင်လယ်သို့ စီးဝင် ပေါင်းဆုံရာ မြစ် …
မန္တလေးက ၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ရိုက်နှက်ပြီး အဓမ္မကျင့်ခဲ့သူကို အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ရှာဖွေနေ
မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မှ အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကို ခိုးယူပြီး ရိုက်နှက်၊ မုဒိမ်းကျင့်ကာ ပြင်စာရွာအနီး တောစပ်တွင် ပစ်ထားခဲ့သူကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် အထူးအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီး ရှာဖွေနေကြောင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး ညီညီက ပြောကြားသည်။ အဲ့ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဖို့အတွက် အထူးအဖွဲတဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီးရှာဖွေနေပါတယ်။ တော်တော်လေးကို နီးစပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အပူတပြင်းစုံစမ်းနေပါတယ်ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ …